Ny Semalt Expert dia mamelabelatra amin'ny fitaovana maimaim-poana
Ilaina ny mahafantatra hoe firy ny sain-drakitra entin'ny fikarohana pejy. Miaraka amin'ny SimpleIndex, tsy vitanao ny hamafa ny angon-drakitra fotsiny ihany fa koa ny pejin-tranonkalanao amin'ny Internet ary mikaroka azy ireo, manatsara ny fahombiazan'ny tranonkala. SimpleIndex dia programa vaovao vaovao mahatalanjona sy matevina. Ny safidy tsara indrindra dia avy amin'ny fotoam-pifaneranana, ny fandoavam-bola, ary ny vola fanampiana. Ny endri-javatra SimpleIndex dia mifamatotra amin'ny interface-friendly interface iray sy ny vidin'ny fihenam-bidy.
Ny tombony lehibe indrindra dia voafaritra etsy ambany.
1. Ny fametrahana ny angon-drakitra betsaka
SimpleIndex dia iray amin'ireo fitaovana fandinganana angon-drakitra izay manome angona betsaka, manome toky ny kalitao ary mandamina azy araka ny fangatahanao. Tsy mahagaga raha maro be ny fangatahana angon-drakitra ho an'ny orinasa, orinasa ary marika an-tserasera. Izany no mahatonga ny fitaovana toy ny SimpleIndex afaka manome fanazavana maro ary tonga amin'ny fanantenana. Noho izany, na tsy maintsy manaisotra ny angona avy amin'ny kitapom-bola haingam-pandeha amin'ny Amazon ianao na te hiditra amin'ny tontolo ara-panatanjahantena mifaninana, tokony hanandrana ity fitaovana ity ianao ary ho azo antoka ny fanamarihana ny marika ao anatin'ny andro vitsivitsy.
2. Tsy misy marimaritra iraisana amin'ny kalitao
Misy fandaharam-pamokarana antontam-baovao maro, manatanteraka ny fepetra takiana aminao amin'ny fomba tsara kokoa. Ny sasany amin'izy ireo dia maimaim-poana amin'ny safidy voafetra raha toa ny hafa dia marefo ary tsy manomboka fanombohana. Mifanohitra amin'izany, ny SimpleIndex dia natao hanangona angona avy amin'ny tranonkala tsotra sy tsara. Ny ampahany tsara indrindra dia tsy handany vola be loatra ity fitaovana ity. Midika izany fa afaka mahazo tombontsoa amin'ity programa fandinganana scraping ity ianao ho toy ny fanombohana ary afaka mampitombo ny fandraisanao an-tserasera mora foana, nefa tsy mampandefitra ny kalitao.
3. Tsara ho an'ny fikarohana momba ny tsena
Ny fanavaozana sy ny fironana dia ahafahantsika mahita ny sarin'ny indostriantsika ankapobeny. SimpleIndex, izay fampiharana vaovao momba ny fampihenana ny angona vaovao, dia manana fiasa manokana miavaka ary mahatonga ny fikarohana tsena mora. Izy io no iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny orinasa tsy mahomby sy orinasa vaovao, ary manampy amin'ny fanombanana ny fironana samy hafa.
4. Fampahalalana vaovao
SimpleIndex no hany fitaovana izay mampanantena ny hanome ny vaovao farany sy ny angona ilaina. Ny sasantsasany amin'ny tolotra fanararaotana dia tsy manome ny vokatra tadiavina. Izy ireo dia mandamina ny angon-drakitra amin'ny endrika tsy misy loko na sarotra atrehina. Fa ny SimpleIndex dia fandaharan'asa feno izay hanatanterahanao ny fepetra fangatahanao mombamomba ny data ary hanome ny fampahalalana marina sy marina fotsiny.
5. Ny fanombanana ara-barotra momba ny faharanitan-tsaina
Tsy afaka manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fandinihana sy ny fanombanana ny orinasa. Tena zava-dehibe amin'ny olona rehetra ny fampahalalana vaovao amin'ny fotoana rehetra. Saingy amin'ny SimpleIndex, mety tsy manara-maso fotsiny ny kalitaon'ny angon-drakitrao ianao fa mandeha ihany koa amin'ny fanombanana fandraharahana tsy misy olana. Azonao atao koa ny manamarina ny fomba nametrahan'ny mpifaninana anao ny teny fototra sy ny karazana angona ampiasainy mba hampitomboana ny raharaham-barotra.
Mba hamehezana azy, dia ho anao ny fandaharam-potoana fanodinana daty nofidinao. Fa raha ny fametrahana marika iray sy ny fikojakojana ny fikambanana fifaninanana, dia tokony hifidy ianao amin'ny SimpleIndex na hafa mitovy amin'ny tahirin-tsakafo hafa Source .